အိန္ဒိယမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ တရက်အတွင်း တသိန်းနီးပါးရှိ
12 စက်တင်ဘာ၊ 2020
အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ တရက်အတွင်း COVID-19 နောက်ထပ် အကူးစက်ခံရသူက တသိန်းနီးပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့က ၂၄ နာရီအတွင်း အကူးစက်ခံရသူ ၉ သောင်းခွဲကျော် (၉၆,၅၅၁) ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် အခုဆို အိန္ဒိယမှာ COVID-19 အကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၄ သန်းခွဲ နဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား ဒီရောဂါအကူးစက်ခံရသူက သောကြာနေ့မှာ ၂၈ သန်းကျော်ရှိပြီး သေဆုံးရသူက ၉ သိန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ အကူးစက်ခံရသူ ၆ သန်းခွဲကျော် (၆,၄၁၇,၁၈၆) နဲ့ ကမ္ဘာမှာ အများဆုံး ဖြစ်နေပြီး သေဆုံးရသူ ၂ သိန်းနီးပါး (၁၉၂,၃၈၁) ရှိနေပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ရဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းအရ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ လူငယ်လူရွယ်တွေကြား ကူးစက်မှု လျှင်လျှင်မြန်မြန် တိုးလာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်ကျန်းမာရေးဌာန ၁၁ ခု မှာရှိတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့ ပြင်ပလူနာတွေကို အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန CDC က စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့ အခါ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သွားရောက် စားသောက်သူက မသွားသူထက် ရောဂါ အကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်လန်း ၂ ဆ ပိုများတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဗြိတိန် နိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရက နေ့စဉ် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၅ သိန်း အတွက် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေရနိုင်တဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson က ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာပဲ ကြေညာပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ဒီနှစ်မကုန်ခင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ မှန်းထားကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အခု လူ ၃၀ အထိ စုဝေးခွင့် ပြုထားရာကနေ ၆ ဦး အထိသာ ခွင့်ပြုဖို့ ကန့်သတ်တဲ့ အမိန့်သစ်ကို လည်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဒါဟာ လာမယ့် သီတင်းပတ်က စတင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ အခု သီတင်းပတ်တွေ အတွင်း ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရသူက နေ့စဉ် သုံးထောင် နီးပါး ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး အခု ထုတ်ပြန်တဲ့ ၆ ဦးထက် ပိုမစုရ အမိန့်ကို လအတော်ကြာ ဆက်ပြီး ချထားနိုင်တယ်လို့ ဗြိတိန်ကျန်းမာရေး တာဝန်ခံ. Chris Whittey က ပြောပါတယ်။
အိန်ဒိယမှာ ကိုဗဈကူးစကျသူ တရကျအတှငျး တသိနျးနီးပါးရှိ
အိန်ဒိယ နိုငျငံမှာ တရကျအတှငျး COVID-19 နောကျထပျ အကူးစကျခံရသူက တသိနျးနီးပါး ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ သောကွာနကေ့ ၂၄ နာရီအတှငျး အကူးစကျခံရသူ ၉ သောငျးခှဲကြျော (၉၆,၅၅၁) ဖွဈသှားတဲ့ အတှကျ အခုဆို အိန်ဒိယမှာ COVID-19 အကူးစကျခံရသူ စုစုပေါငျး ၄ သနျးခှဲ နဲ့ ကမ်ဘာမှာ ဒုတိယအမြားဆုံး ဖွဈနပေါတယျ။
ကမ်ဘာတလှား ဒီရောဂါအကူးစကျခံရသူက သောကွာနမှေ့ာ ၂၈ သနျးကြျောရှိပွီး သဆေုံးရသူက ၉ သိနျးကြျော ရှိနပေါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံကတော့ အကူးစကျခံရသူ ၆ သနျးခှဲကြျော (၆,၄၁၇,၁၈၆) နဲ့ ကမ်ဘာမှာ အမြားဆုံး ဖွဈနပွေီး သဆေုံးရသူ ၂ သိနျးနီးပါး (၁၉၂,၃၈၁) ရှိနပေါတယျ။ ဟားဗတျတက်ကသိုလျ ရဲ့ သုတသေန စဈတမျးအရ အမရေိကနျ နိုငျငံမှာ လူငယျလူရှယျတှကွေား ကူးစကျမှု လြှငျလြှငျမွနျမွနျ တိုးလာနတော တှရေ့ပါတယျ။
အမရေိကနျကနျြးမာရေးဌာန ၁၁ ခု မှာရှိတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာပွနတေဲ့ ပွငျပလူနာတှကေို အမရေိကနျ ကူးစကျရောဂါ ထိနျးခြုပျရေး ဗဟိုဌာန CDC က စဈတမျးကောကျကွညျ့တဲ့ အခါ စားသောကျဆိုငျတှမှော သှားရောကျ စားသောကျသူက မသှားသူထကျ ရောဂါ အကူးစကျခံရဖို့ အခှငျ့လနျး ၂ ဆ ပိုမြားတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
ဗွိတိနျ နိုငျငံမှာတော့ အစိုးရက နစေ့ဉျ အနညျးဆုံး လူပေါငျး ၅ သိနျး အတှကျ မိနဈပိုငျးအတှငျး အဖွရေနိုငျတဲ့ COVID-19 ကူးစကျမှုရှိမရှိ စမျးသပျစဈဆေးမှုတှေ လုပျပေးတော့မှာ ဖွဈကွောငျး ဝနျကွီးခြုပျ Boris Johnson က ဒီသီတငျးပတျထဲမှာပဲ ကွညောပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကို ဒီနှဈမကုနျခငျ လုပျပေးနိုငျဖို့ မှနျးထားကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ အခု လူ ၃၀ အထိ စုဝေးခှငျ့ ပွုထားရာကနေ ၆ ဦး အထိသာ ခှငျ့ပွုဖို့ ကနျ့သတျတဲ့ အမိနျ့သဈကို လညျး ထုတျပွနျလိုကျပွီး ဒါဟာ လာမယျ့ သီတငျးပတျက စတငျမှာ ဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။ ဗွိတိနျမှာ အခု သီတငျးပတျတှေ အတှငျး ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရသူက နစေ့ဉျ သုံးထောငျ နီးပါး ရှိနတော ဖွဈပွီး အခု ထုတျပွနျတဲ့ ၆ ဦးထကျ ပိုမစုရ အမိနျ့ကို လအတျောကွာ ဆကျပွီး ခထြားနိုငျတယျလို့ ဗွိတိနျကနျြးမာရေး တာဝနျခံ. Chris Whittey က ပွောပါတယျ။
အိန္ဒိယ ကိုဗစ်ကူးစက်သူအရေအတွက် ဘရာဇီးလ်နီးပါးရှိလာ
ဂျကာတာမြို့တော် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ကန့်သတ်ချက်တွေ ပြန်ချတော့မယ်
အိန္ဒိယ တရုတ် နယ်စပ်ပစ်ခတ်မှု အပြန်အလှန်စွပ်စွဲ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း ကိုဗစ်ကြောင့်တရက်အတွင်းသေဆုံးသူ တထောင်ကျော်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်လာ